ခရစ်တော်၌ရှိသော အထောက်အထား - Worldwide Church of God Switzerland
ဆောင်းပါး > အသက်တာ၏စကားပြောသော > ခရစ်တော်အားအထောက်အထား
အသက် ၅၀ ကျော်သူအများစုဟာနီကာတာခရူးရှော့ကိုမှတ်မိကြလိမ့်မည်။ သူသည်ယခင်ဆိုဗီယက်ယူနီယံ၏ခေါင်းဆောင်အနေနှင့်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတွင်မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ်သူ၏ဖိနပ်ကိုဖိနပ်ပေါ်တင်ပြီးသူမအရောင်မုန်တိုင်းထန်သောဇာတ်ကောင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည်အာကာသထဲတွင်ပထမဆုံးလူသားဖြစ်သောရုရှားအာကာသယာဉ်မှူး Yuri Gagarin သည်အာကာသသို့သွားသော်လည်းထိုတွင်ဘုရားသခင်မရှိကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ Gagarin ကိုယ်တိုင်မူသူသည်ထိုကဲ့သို့သောကြေငြာချက်မျိုးပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ သို့သော်ခရူးရှော့ဗ်သည်အမှန်ပင်မှန်ကန်သော်လည်းသူ၏စိတ်ထဲရှိသောအကြောင်းပြချက်များကြောင့်မဟုတ်ပါ။
ယေရှု၏မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းရေးသားခဲ့သောမMatthewဲ၊ မာကုနှင့်လုကာတို့နှင့်မတူဘဲယောဟန်သည်သခင်ယေရှု၏မြင့်မြတ်ခြင်းနှင့်စတင်ခဲ့သည်။ ယေရှုသည်အစအ ဦး ၌ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်ဟုပြောခဲ့သည်။ ပရောဖက်ပြုထားသည့်အတိုင်းသူသည်“ ငါတို့နှင့်အတူဘုရားသခင်ရှိတော်မူလိမ့်မည်။ ယောဟန်သည်ဘုရားသခင့်သားတော်သည်လူဖြစ်လာပြီးကျွန်ုပ်တို့ထဲမှတစ် ဦး အဖြစ်နေထိုင်ခဲ့သည်ဟုရှင်းပြသည်။ ယေရှုသည်သေပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူပြီးခမည်းတော်၏လက်ျာဘက်၌ထိုင်တော်မူသောအခါသူသည်လူသား၊ ဘုရားသခင်၏ဘုန်းအသရေနှင့်ပြည့်ဝ။ လူသားနှင့်ပြည့်နှက်လျက်နေ၏။ သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်လူသားတို့နှင့်ဘုရားသခင်၏အမြင့်မြတ်ဆုံးမိတ်သဟာယဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြောင့်လူသားများကိုမိမိ၏ပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အညီလူသားများဖန်တီးရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့တဲအတွင်း၌ထားရန်လွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် human ၀ ံဂေလိတရား၏လျှို့ဝှက်ချက်ပင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည်လူသားတို့ကိုဤမျှလောက်ဂရုစိုက်ပြီးကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကိုချစ်မြတ်နိုးသည်။ ၎င်းတွင်သင်နှင့်ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သိပြီးချစ်ကြသူအားလုံးပါဝင်သည်။ နက်နဲသောအရာ၏အဖြေမှာဘုရားသခင်ကလူသားများကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြခြင်း၊ လူသားတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ယေရှုခရစ်တော်အားတွေ့ဆုံခြင်းအားဖြင့်လူသားများကိုချစ်ကြောင်းပြသခြင်းဖြစ်သည်။
Johannes မှာ 5,39 wird Jesus wie folgt zitiert: «Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin; und sie ist’s, die von mir zeugt; aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet.» Die Bibel ist dazu da, um uns zu Jesus zu führen, um uns zeigen, dass Gott sich in Jesus durch seine Liebe so stark gebunden hat, dass er uns niemals loslassen wird. Im Evangelium sagt Gott zu uns: «Jesus ist mit der Menschheit eins und eins mit dem Vater, was bedeutet, dass die Menschheit die Liebe des Vaters für Jesus und Jesu Liebe für den Vater teilt. Das Evangelium sagt uns also: Weil Gott Sie so vollständig und unwiderstehlich liebt, und weil Jesus bereits alles getan hat, was Sie nicht für sich selber tun konnten, können Sie jetzt mit Freude bereuen, an Jesus als ihren Herrn und Erlöser glauben, sich selbst verleugnen, das Kreuz auf sich nehmen und ihm nachfolgen.
၀ ံဂေလိတရားသည်ဒေါသကြီးသောဘုရားသခင်ကတစ်ယောက်တည်းကျန်ရစ်ရန်ခေါ်ဆိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏မမှားယွင်းသောချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုလက်ခံရန်နှင့်သင်၏အသက်တာ၏အချိန်တိုင်းတွင်ဘုရားသခင်ကသင့်ကိုခြွင်းချက်မရှိချစ်သောကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင့်ကိုထာဝရချစ်ခြင်းမေတ္တာဘယ်တော့မှမတည်တော့ဘူး